Dhacdo Cajiiba Duulimaad Loo Baajiyay Ilma Yar Oo Xidhan Waayay Maask Awgii | Kaafi News
Dhacdo Cajiiba Duulimaad Loo Baajiyay Ilma Yar Oo Xidhan Waayay Maask Awgii
Diyaarad u kala gooshi lahayd gudaha dalka Canada ayaa duulimaadkeedii baajisay kadib markii uu canug yar xiran waayay maask, kadibna booliska loo yeeray.
Safwan Choudhry ayaa sheegay in shirkadda duulimaadyada ee WestJet ay doonaysay in maaska loo xiro gabadhiisa oo 19 bilood jir ah, balse ay oohin joojin weyday markii la isku-dayay in af-xirkaasi loo geliyo.
Shirkadda ayaa sheegtay in arinta aanay ahayn gabadha yar, maadaama ay ka yartahay da’da xirashada maaskaraha, balse gabar kale oo saddex jir ah oo uu dhalay Mr Choudhry
Duulimaadkaasi oo subaxnimadii Talaadada u kala gooshi lahaa magaalooyinka Calgary iyo Toronto ayaa la joojiyay, waxaana dhammaan rakaabkii lagu amray inay degaan.
“Ma ahayn wax aan horay u arkay,” ayuu Mr Choudhry u sheegay BBC-da.
Waxa uu intaa ku daray in gabadhooda saddex jirka ah ay wax cunaysay inyar ka hor inta aanay diyaaradda kicin, kadibna ay u yimaadeen hawlwadeennada oo u sheegay in labada canugba looga baahan yahay inay maask xirtaan. Choudhry ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay xirnaayeen maaskaraha.
Mr Choudhry ayaa sheegay in muran kooban kadib ay maaskaraha xiratay gabadhiisa saddex jirka ah.
“Balse gabadha yar ayaa ka argagaxday waxa socday,” ayuu yiri aabahaasi oo intaa ku daray in gabadha yar ay xitaa matagtay.
Waxa uu intaa ku daray in shaqaalaha WestJet ay si xun ula dhaqmeen, una sheegeen in maadaama gabadha yar aanay maask xiran, ay qoyskaasi oo dhan ku qasban yihiin inay diyaaradda ka degaan.
Choudhry ayaa sheegay in xitaa loogu hanjabay xarig iyo dacwad u horseedi karta xabsi.
Aabahan ayaa sheegay inay go’aansadeen inay ka haraan diyaaraddaasi. Waxa uu intaa raaciyay in markii dambe uu ogaaday in sharciga u yaal waaxda gaadiidka Canada ay tahay in carruurta da’doodu ka weyn tahay laba sano oo keliya looga baahan yahay inay xirtaan maask.
Maxay arinkan ka tiri shirkadda WestJet?
WestJet ayaa beenisay in gabadha 3 jirka ah ay xiratay maask.
War qoraal ah oo ay soo saartay ayay ku sheegtay in waalidiinta ay diideen in maask ay u xiraan gabadhooda weyn, kadib markii hawlwadeennada diyaaradda ay sidaa ku wargeliyeen.
Muuqaal lagu duubay telefoonka Mr Choudhry ayaa muujinaya gabadhiisa weyn oo maask xiran kadib markii ay booliska gudaha u galeen diyaaradda.
Aabaha ayaa sheegay in inkastoo qaar kamid ah rakaabka diyaaradda ay u xanaaqeen qoyskiisa, haddana inta badan ay taageero u muujiyeen, gaar ahaan kadib markii ay oyday gabadha yar.
Mr Choudhry ayaa sheegay inay diyaaradda ka soo dageen markii ay booliska u yimaadeen, kadibna duulimaadkii oo dhan la joojiyay, dibna loogu dhigay maalinta xigtay.
Booliska ayaan wax dacwad ah ku soo oogin qoyskaasi.
Marian Nur oo kamid ahayd rakaabka diyaaradda ayaa duubtay waxa dhacay, maadaama ay ka cabsi qabtay in qoyska loo beegsaday isirkooda iyo diintooda. Xaaska Choudhry ayaa xijaabneyd.
“Waxaan aad ula yaabay sida ay isu dejiyeen waalidiinta oo aanay ugu qeylin ama caro ugu muujin shaqaalaha. Waxa ay doonayeen inay aragtidooda fahansiiyaan oo keliya,” ayay Marian u u sheegtay BBC.
Mr Choudhry ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay weli ku sugan yihiin Calgary, welina aanay helin duulimaad kale oo u qaada Toronto. Waxa uu intaa ku daray inuu rajeynayo in arintan oo kale aanay ku dhicin qof kale.